Qabsooftuu Caaltuu Taakkalaa kan amma dura waggaa 12 hidhamtee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQabsooftuu Caaltuu Taakkalaa kan amma dura waggaa 12 hidhamtee
Qabsooftuu Caaltuu Taakkalaa kan amma dura waggaa 12 hidhamtee baate boodas qabamtee shoorarkeessummaan himatmte har’a injifannnoon baatee jirti!!
Via Milkii Addunyaa
Obbo #Olbaanaa_Leellisaa mana hidhaa Qaallitti irraa gad lakkiifamuuf akka ta’e beekame. Obbo Olbaanaan Hidhaa waggaa 13 itti murtaa’ee ture. Murtii isaanii Yeroo fixaa jiran kanatti guyyaa Kalleessa “Mallatteessi si baasina” akka jedhamanii diidan dhageenye ture.
Oduun ammaan tana qaallitti irraa dhufte akka jettuutti ammoo gootichi Uummataa Obbo Olbaanaa Lelisaa ni hiikamuu jedhamee maatii fi namootni hedduun balbala mana hiidhaa irra dhaabbatanii akka eegaa jiran barameera. Uummanni Oromoo fi maatiin Obbo Olbaanaa Lelisaa baga gammaddan!!
Aarsaan Obbo Olbaanaan kaffalan Dr #Mararaatti aanee kan Olbaanaa Leellisaa dursu hin jiru. Paartii ONC fi WFDO tokkomsuu keessatti gahee guddaa qabu. OFCf lafee dugdaa turan. Obbo Olbaanaan bara 2005 ONC bakka bu’anii filannoo injifachuun miseensa mana maree caffee Oromiyaa turan. Obbo Olbaanaan nama guutuu Oromiyaa keessa naanna’un Uummata barsisaa fi ijaaraa ture dha. Obbo Olbaanaan Abbaa Qeerrooti.
Obbo Olbaanaan Baran namni hedduun midiyaa soddaachaa ture keessatti biyya keessa taa’aanii yeroo adda addaa Midiyaa irratti bahuun Uummataaf sagalee turan. Rakkoo Uummata irra gahu sodaa tokko malee addunyaatti lalabaa turan. Yeroon ani mana hiidhaa Qaallitti ture nama mana hiidhaatti dedeebi’anii nu gaafachaa ture dha. Gootummaa fi murannoo isaan qaban ibsuuf jechan hin qabu.. Walumaan galatti Obbo Olbaanaan hoogganaa dhugaa kan jireenya isaanii guutuu sabaaf jiraatan dha. Wayyaaneenis kana waan berktuuf murtii jabaa hiidhaa waggoota 13 irratti murteessitee dararaa turte. Mana hiidhaa keessattis dhukkubsatanii Yaalii gahaa dhorkamuun rakkachaa tura.
Obbo #Olbaanaan manneen hidhaa hedduu keessatti waggoota dheeraaf dararamaa turan
1994-1995 Mana hidhaa Geedoo
1996 masaraa mootummaa Ambo
1998-2000 Sanqallee Ambo fi Huurso
2003-2004 Karchallee Amboo
2009 irraa kaase hanga har’aatti Qaallitti fi Shawa Roobitti hidhamanii hiraarsamaa jiru/turan.